हनिमुन कहा मनाउदै छन चर्चित हास्य कलाकार बल्छी धुर्बेले ? – Todays Nepal
हनिमुन कहा मनाउदै छन चर्चित हास्य कलाकार बल्छी धुर्बेले ?
हनिमुन मनाउने कुरामा बल्छि धुर्वेले जिस्काए पछि हाँस्यकलकार मरिचमान श्रेष्ठ अर्थात बल्छी धु्रवेले लमजुङ्का करुणा खड्कासंग शुक्रबार लगनगाँठो कसेका छन् । सुटुक्क मन्दिरमा विवाह गरेका मरिचमानका विवाहमा परिवार आफन्त र केही सिमित कलाकार एवम् सञ्चारकर्मीहरुको मात्र उपस्थिती रहेको थियो । मन्दिरमा सामान्य हिन्दू परम्परा अनुसार विवाह गरेका उनीहरु सञ्चारकर्मीहरुको माझ केही रोम्यान्टिक मुडमा देखिए ।
आफ्नो फोटो खिचाउदै गर्दा माहोल एकाएक त्यतीबेला गर्मायो जति बेले बल्छि धुर्वे अर्थात मरिचमान श्रेष्ठले आफ्नी दुलही करुणालाई जुरुक्कै बोके । मरिचमान भन्दा केही मोटी देखिएकी दुलहीलाई जिस्कने क्रममा उचालेका हुन् ।
सो समयमा माहोल केही रमाइलो र हेर्न लायकको बनेको थियो । विवाह पछि हनुमुन मानाउन कहाँ जादै हुनुहन्छ भनेर सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राख्दा भने नवदुलही करुणा लाजले भुतुक्कै भए । केही समान्य बन्दै हनिमुन मनाउने भन्ने बारेमा सोच्दै छौँ भन्दै जवाफ दिईन् । यता बल्छि धुव्रे अर्थात मरिचमान श्रेष्ठले भने आफूहरु सिम्ला जाने की भन्ने मुडमा रहेको खुलाए ।
मरिचमान र करुणाले ६ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् । गोरखाका मरिचमानले लमजुङको भोटेओडारकी करुणालाई दुलही बनाएर भित्र्याएका छन् । कार्यक्रमको सिलसिलमा लमजुङ पुगेको बेला उनीहरुको सम्पर्क बढ्दै गएपछि सम्बन्धले प्रेमको रुप लिएको थियो । मरिचमानकी श्रीमती करुणा खड्का पेशाले शिक्षिका हुन् ।
उनले बिगत तीन वर्ष देखि अध्यापन गर्दै आएकी छिन् । हाल उनी पाठशाला नेपालमा शिक्षिकाको रुपमा कार्यरत छिन् । मरिचमान श्रेष्ठ भने मेरी बास्सैबाट बल्छि धुवे्रको नामबाट देश विदेशमा चर्चित छन् । पछिल्लो समयमा मेरि बस्सैमा लेखन तथा निर्देशन समेत गर्दै आएका छन् । उनी हास्यकलाकार मात्रै नभएर एक कुशल नृत्य निर्देशक र राम्रो नाच समेत सिकाउने गर्दछन् ।
मलेसियामा दुर्घटनामा परेर फर्किएका खेमबहादुर घर्तीले पाए बीमा रकम